जुन तरकारीमा पनि मिल्ने आलुको प्याजसँग छ ‘दुस्मनी’ ? तपाईंलाई थाहा नभएका यसका तीन तथ्य | Ratopati
तरकारीको राजा आलु भोजनको जरुरी हिस्सा बनिसकेको छ । यसमा भिटामिन सी, पोटासियम, भिटामिन–बी सिक्स र फाइबर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । आलुमा फ्लेभोनाइड्सको नामको एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । तर आलु त्यतिबेला मात्रै शरीरका लागि स्वस्थ हुन्छ, जब तपाईंले सही आलु किनेर ल्याउनुहुन्छ ।
दिल्लीमा न्यूट्रिसनिस्ट शैली तोमरका अनुसार तपाईंले आलु किन्दा त्यो कसिलो होस् भन्ने ध्यान राख्नुपर्छ । गिलो हुनुहुन्न । थिच्दा आलु खुम्चिन खालको हुनुहुन्नँ । आलुको सतहमा कुनै प्रकारको काटिएको वा धेरै दाग पनि हुनुहुन्नँ । त्यसो भए आलु किन्दा के के कुरामा ध्यान दिने त ?
टुसा पलाएको आलु किन्नु हुँदैन
आलुमा टुसा पलाएको छैन भने त्यो ताजा होइन । टुसा पलाएको आलुमा ग्लाइकोलाइड र काकोनाइन नामको रसायन बन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
सेन्टर फर फुड सेफ्टी रिसर्चका अनुसार टुसा पलाएको आलु खानु हुँदैन । किनकी यो आलुमा ग्लाइकोलाइड अधिक मात्रामा पाइन्छ । ग्लाइकोलाइड आलुको बिरुवामा पहिले देखि नै पाइन्छ र यो विषालु पदार्थ हो । धेरै मात्रामा ग्लाइकोलाइड भएको खानेकुरा खाँदा पखाला लाग्ने हुन्छ । त्यसैले टुसा पलाएको आलु किन्नु हुँदैन ।
हरियो आलु नकिन्नुहोस्
आलुको रंग हरियो हुनुको अर्थ त्यसमाथि एउटा विषाक्त रसायनको निर्माण हुनु हो । यो रसायनको नाम हो सोलनाइन । यदि सतहमा हल्का फुल्का हरियो छ भने त्यसलाई काटेर फालिदिए हुन्छ र अन्य भाग प्रयोग गरे हुन्छ । तर यदि पूरै आलु नै हरियो छ भने त्यो नखाएकै राम्रो । सोलनाइनका कारण आलुमा कडापन आउछ र यो खाँदा संक्रमण पनि हुनसक्छ । बान्ता हुने, पेट दुख्ने र पखाला लाग्ने जस्ता समस्या पनि आउन सक्छ । अधिक मात्रामा सोलनाइनले मस्तिष्क प्रणालीलाई पनि क्षती पु¥याउँछ । किनकी यो एक किसिमको न्यूरोटक्सिन हो ।
फ्रिजमा नराख्नुहोस् आलुः
आलु किनिसकेपछि यसलाई फ्रिजमा नराख्नुहोस् किनकी फ्रिजमा राख्नाले आलुको स्टार्च सुगरमा परिवर्तन हुन थाल्छ । त्यसैले आलु गुलियो हुन्छ । आलुलाई सूर्यको किरण सिधै नपर्ने स्थानमा राख्नुहोस् ।
आलुलाई पेपर ब्यागमा वा परफोरेटेड प्लास्टिक ब्यागमा राख्नुहोस् । ओसिलो सतहमा पनि आलु नराख्नुहोस् । यस्तो ठाउँमा पनि नराख्नुहोस् जहाँको तापक्रम उच्च छ ।
प्याजसँगै आलु नराख्नुहोस्
आलुलाई प्याजसँग पनि नराख्नुहोस् । यसबाट पनि टुसाउने समस्या बढी हुन्छ । यो सबै समस्याबाट बच्नका लागि आपूmलाई छोटो अवधिमा पुग्ने ठिक्क आलु मात्रै किन्नुहोस् । यसलाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्ने समस्याबाट बच्नुहोस् ।